Ungawathola Kanjani Amakhasimende Emuva | Martech Zone
Ungawathola Kanjani Amakhasimende Emuva
NgoLwesibili, Okthoba 8, 2019 NgoLwesibili, Okthoba 8, 2019 Douglas Karr
Enye yezinto ebaluleke kakhulu yebhizinisi elisha noma elisungulwe ukuqinisekisa ukuthi banazo imali engaguquguquki. Akunandaba ukuthi ukuliphi ibhizinisi, amakhasimende abuyayo ayindlela enhle kakhulu yokusungula imali ezinzile. Ingxenye engokwemvelo yalokhu, nokho, ukuthi amakhasimende azolahleka ngokuhamba kwesikhathi ukuze aqhume.
Ukususa ukulahleka ku-churn, ibhizinisi lingenza izinto ezimbili:
Zuza amakhasimende amasha
Sebenzisa amasu ukuze win emuva ezindala.
Yize zombili ziyingxenye ebalulekile yebhizinisi elinempilo, iqiniso liwukuthi ukuthola amakhasimende amasha angakwazi kubiza okungu-5x ngaphezulu kunokuqasha abadala. Ngokuwina amakhasimende angaphambilini, usuvele uyazi ukuthi bayayithanda insizakalo noma umkhiqizo wakho, ukuthi injani imikhuba yabo yokuthenga, nokuthi yiziphi izinsizakalo abazithandayo. Ungakhomba kalula ukumaketha kwakho, ngakho-ke unciphise izindleko.
Kodwa-ke, ukubuyisa ikhasimende elidala kulula ukusho kunokukwenza. Futhi kunesu lokuwina emuva elihlukile kuwo wonke amakhasimende. Kuzofanele uhlaziye imininingwane onayo kubo, uqoqe izinhlolovo zokuphuma nezinsizakalo, bese uhlela isu kwikhasimende ngalinye. Bheka le infographic engezansi yiFundera ukuze ufunde amasu aphumelela kakhulu woku win emuva abathengi bangaphambili.
Tags: Ukuthengaukugcinwa kwamakhasimendeukwaneliseka kwamakhasimendeama-imeyili okubandakanyafunderaukuhlaziywa kwe-rfmwin emuvaukunikezwa kokubuyela emuva
Iqala umkhankaso wakho wokukhangisa ngevidiyo ngezindlela ezi-3